Dagaal ciidanka Koofur Galbeed iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Iidaale – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeyay ciidanka Maamulka Koofur Galbeed iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Iidaale ee Gobolka Baay, kaddib markii ciidamada booliska gaarka ah ay weerar ku qaadeen fariisin Al-Shabaab ku lahaayeen deegaankaas.
Sida ay sheegayaan wararka dagaaladan oo ahaa kuwo culus ayaa waxaa ku dhintay illaa 10 ruux oo ahaa dhinacyadi dagaalamayay.
Taliye kuxigeenka Ciidamada Booliska Gaarka ah Maxamed Isaaq Cara-Cas ayaa sheegay in weerar gaadmo ah ku qaadeen meel Al-Shabaab degenaayeen, isla markaana khasaare xooggan ay gaarsiiyeen.
“Ciidanka Booliska Gaarka ah ee Koofur Galbeed waxay weerar qorsheysan oo gaadmo ah ku qaadeen nimankii AlShabaab ahaa meel ay ka degenaayeen Iidaale, ayaga ma filaneyn, khasaare ayaga ayuu u badan yahay, dhimashada waa 7 qof”ayuu yiri Taliye kuxigeenka Booliska Gaarka ah oo u waramayay Idaacada VOA.
Waxaa uu sheegay in weerarada qorsheysan ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu ka socdo Gobolada Bay iyo Bakool, waxaana uu xusay in maalmo ka hor howl gallo ka fuliyeen deegaan u dhow Diinsoor, halkaasoo ay ku soo furteen maxaabiis.
Maamulka Koofur Galbeed ayaa dhowaan sheegay inay howl gallo ka wadaan qeybo ka mid ah deegaanada Bay iyo Bakool, isla markaana Al-Shabaab ku bartilmaameedsanayaan fariisimaha ay ku leeyihiin deegaanadaas.
Weerar bambaano oo dad badan ku dhaawacmeen oo xalay ka dhacay Beledweyn